UKUSETSHENZISWA OKUHLOSIWE I-StrongStep® Adenovirus Rapid Test Device (Indle) yindlela esheshayo yokubona ukutholwa kokuqagela kwe-adenovirus emifanekisweni yabantu engcolile. Leli kit lenzelwe ukusetshenziswa njengosizo ekutholeni ukutheleleka kwe-adenovirus. ISINGENISO Ama-adenoviruses e-Enteric, ikakhulukazi i-Ad40 ne-Ad41, ayimbangela ehamba phambili yohudo ezinganeni eziningi eziphethwe yisifo sohudo esibi, okulandelwa ama-rotaviruses kuphela. Isifo sohudo esibucayi siyimbangela enkulu yokufa i ...
UKUSETSHENZISWA OKUHLOSIWE I-StrongStep® Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device (Indle) i-immunoassay ebonakalayo esheshayo yokutholwa okufanelekile, kokuqagelwa kweGiardia lamblia kuma-speciens womuntu. Leli kit lenzelwe ukusetshenziswa njengosizo ekutholeni ukutheleleka ngeGiardia lamblia. ISINGENISO Ukutheleleka ngezinambuzane zihlala kuyinkinga ebucayi yezempilo emhlabeni jikelele. IGiardia lamblia yi-protozoa ejwayelekile kunazo zonke eyaziwa ukuthi ibhekele esinye sezimbangela ezinkulu zohudo olunzima kubantu, ...
Ukuhlolwa kweH. Pylori Antigen
I-StrongStep® I-H. pylori Antigen Rapid Test iyindlela yokubuka esheshayo esheshayo yokutholwa kwekhwalithi efanele, yokuqagela ye-Helicobacter pylori antigen ene-fecal yomuntu njengesibonelo.
ISINGENISO I-Rotavirus iyona ejenti elijwayeleke kakhulu elibhekele i-acute gastroenteritis, ikakhulukazi ezinganeni ezisencane. Ukutholakala kwayo ngonyaka we-1973 kanye nokuhlangana kwayo ne-infantile gastro-enteritis bekumele intuthuko ebaluleke kakhulu ekutadisheni i-gastroenteritis engabangelwa yigciwane elibi. I-Rotavirus idluliselwa ngomzila we-oral-fecal onenkathi yokufukamela yezinsuku eziyi-1-3. Yize izibonelo eziqoqwe phakathi nosuku lwesibili nolwesihlanu lokugula zilungele i-antigen detectio ...
Izinzuzo Ukuqonda okuphezulu okuphezulu (89.8%), ukucaciswa (96.3%) kufakazelwe ngezilingo zomtholampilo eziyi-1047 ngesivumelwano esingu-93.6% uma kuqhathaniswa nendlela yamasiko. Inqubo elula yokugijima One-step, alikho ikhono elikhethekile elidingekayo. Shesha imizuzu eyi-10 kuphela edingekayo. Imininingwane yokugcinwa kwamazinga okushisa ekamelweni Ukuzwela 89.8% Okucacile 96.3% Ukunemba ngo-93.6% CE kumakwe nge-Kit Size = 20 test File: Manuals / MSDS ISINGENISO I-Salmonella yigciwane elibanga esinye sezifo ezivame kakhulu ze-enteric (emathunjini) ...
ISINGENISO Imishayabhuqe yekholera, edalwe yi-V. Cholerae serotype O1, iyaqhubeka nokuba yisifo esibuhlungu esibaluleke kakhulu emhlabeni jikelele emazweni amaningi asathuthuka. Ngokomtholampilo, ikholera ingahle isuke ekoloni elingenampawu kuya kohudo olunzima ngokulahleka okukhulu kuketshezi, okuholela ekuphelelweni amanzi emzimbeni, ukuphazamiseka kwe-electrolyte, nasekufeni. I-V. Ikholera O1 ibangela lesi sifo sohudo ngokufihlakala kwamathumbu amancane nokukhiqizwa kobuhlungu obunamandla bekholera, Ngenxa yomtholampilo kanye ne-epidemiologic ...
Ukuhlolwa kwe-Vibrio cholerae O1-O139
ISINGENISO Imishayabhuqe yekholera, edalwe yi-V. Cholerae serotype O1 ne-O139, iyaqhubeka nokuba yisifo esibuhlungu esibaluleke kakhulu emhlabeni jikelele emazweni amaningi asathuthuka. Ngokomtholampilo, ikholera ingahle isuke ekoloni elingenampawu kuya kohudo olunzima ngokulahleka okukhulu kuketshezi, okuholela ekuphelelweni amanzi emzimbeni, ukuphazamiseka kwe-electrolyte, nasekufeni. I-V. Cholerae O1 / O139 ibangela lesi sifo sohudo ngokufihlakala kwamathumbu amancane nokukhiqizwa kobuhlungu obunamandla bekholera, Ngenxa yomtholampilo kanye ...
Ukuhlolwa kwe-bacterial vaginosis
UKUSETSHENZISWA OKUHLOSIWE I-StrongStep® Bacterial vaginosis (BV) Rapid Test Device ihlose ukukala i-pH yesitho sangasese ukuze isizakale ekutholeni i-Bacterial vaginosis. ISINGENISO Inani le-pH eline-esidi sowesifazane elingu-3.8 kuya ku-4.5 liyisidingo esiyisisekelo sokusebenza kahle kohlelo lomzimba lokuvikela isitho sangasese sowesifazane. Lolu hlelo lungagwema ngempumelelo ikoloni ngamagciwane kanye nokwenzeka kokutheleleka kwesitho sangasese sowesifazane. Ukuvikelwa okubaluleke kakhulu futhi kwemvelo kakhulu ekuhlolweni kwesitho sangasese sowesifazane ...
ISINGENISO IVulvovaginal candidiasis (WC) kucatshangwa ukuthi ngesinye sezimbangela zezimpawu zesitho sangasese sowesifazane. Cishe, ama-75% abesifazane azotholakala ene-Candida okungenani kanye ngesikhathi sokuphila kwabo. U-40-50% wabo uzohlushwa izifo eziphindaphindwayo kanti u-5% ulinganiselwa ukuthi ahlakulele iCandidiasis engalapheki. I-Candidiasis ivame ukuxilongwa ngokungeyikho kunezinye izifo ezithathelana nesitho sangasese sowesifazane. Izimpawu ze-WC ezibandakanya: ukulunywa kanzima, ubuhlungu besitho sangasese sowesifazane, ukucasuka, ukuqubuka ezindebeni zangaphandle zesitho sangasese sowesifazane ...
I-Chlamydia ne-Neisseria gonorrhoeae
ISINGENISO UGonorrhea yisifo esithathelwana ngocansi esidalwa yigciwane i-Neisseria gonorrhoeae. I-gonorrhea ingesinye sezifo ezithathelwanayo ezivame kakhulu ezithathelwanayo futhi isatshalaliswa kakhulu ngesikhathi sokuya ocansini, kufaka phakathi ucansi lwangasese, lomlomo nolwangemuva. Isidalwa esiyimbangela singathinta umphimbo, sikhiqize umphimbo obuhlungu obukhulu. Ingangena kwi-anus ne-rectum, ikhiqize isimo se-d esibizwa nge-proctitis. Kwabesifazane, ingatheleleka esithweni sangasese, ibangele ukucasuka ngemisele (...
Ukuhlolwa okusheshayo kweStrongStep® Chlamydia trachomatis kuyindlela esheshayo yokuhamba kwe-lateral yokuthola ukutholakala kokuqagela kwekhwalithi ye-Chlamydia trachomatis antigen ku-swab urethral nowesifazane wesibeletho somlomo wesibeletho. Izinzuzo Kudingeka imizuzu eyi-15 elula futhi esheshayo, ukuvimbela ukulinda ukulinda imiphumela. Ukwelashwa ngesikhathi esifanele Inani eliphakeme lokuqagela lomphumela omuhle nokucaciswa okuphezulu kunciphisa ubungozi be-sequelae nokudluliswa okuqhubekayo. Kulula ukusebenzisa inqubo eyodwa, awekho amakhono akhethekile noma i-instru ...
UKUSETSHENZISWA OKUHLOSIWE I-StrongStep® Cryptococcal Antigen Rapid Test Device yindlela yokuhlola umzimba esheshayo yokutholwa kwama-antigen e-capsular polysaccharide ezinhlobo eziyinkimbinkimbi ze-Cryptococcus (i-Cryptococcus neoformans ne-Cryptococcus gattii) ku-serum, i-plasma, igazi lonke kanye ne-cerebral spinal fluid (CSF). Isilingo isilingo esisetshenziswa ngudokotela esisebenzisa i-laboratory esingasiza ekutholakaleni i-cryptococcosis. ISINGENISO I-Cryptococcosis ibangelwa yizo zombili izinhlobo zezinhlobo ze-Cryptococcus com ...
H. Pylori Ag Ukuhlolwa Okusheshayo Kuthola I-Antigen, Ikhithi Yokuhlola ye-Igm / Iggrapid, Inoveli Coronavirus Rapid Test Ket, ICoronavirus Yokuhlolwa Kwe-Covid-19, ICoronavirus Antigen Test Kit, IVibrio Cholerae O1 / O139 Ukuhlolwa Okusheshayo Kwe-Antigen Combo,